Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Nahita ny tantaram-pitiavan'i Nacho Fernandez momba ny tantaram-pahaterahana ny tantaram-pianakaviana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny fiarovan-tena iray izay fantatra amin'ny anaram-bosotra; "Mpikambana ao amin'ny Club". Ny tantaram-pianakavian'i Nacho Fernandez momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana hatramin'ny vanim-potoana hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro momba ny OF-Pitch tsy dia fantatra loatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny baolina nipoaka nipoaka tao amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2018 FIFA ho an'ny fireneny. Na izany aza, mpankafy vitsivitsy ihany no mahafantatra ny momba ny Bio Bio Nacho izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Nacho Fernandez Childhood Story Plus Untold -Voalohandohan'ny fiainana
José Ignacio Fernández Iglesias dia teraka tamin'ny andro 18 tamin'ny 1990 tamin'ny volana janoary tao Madrid, Espagne. Teraka tamin'ny reniny, Maite Iglesias sy ny rainy, José María Fernández Nacho, ray aman-dreny mahafinaritra (sary etsy ambany), dia avy amin'ny Madrid Espaina.
Ny tantaram-pianakavian'i Nacho Fernandez dia mahaliana, raha tsy mahazatra - ny an'ny fiainana fanandramana fahazazana izay lasa nahazo laza faran'izay mahatalanjona.
Teraka tamin'ny lahimatoa sy zanaky ny fianakaviany i Nacho. Nihalehibe niaraka tamin'ny roa tamin'ireo iray tampo aminy i Alex sy Maite Fernández izay mitondra ny anarana mitovy amin'ny reniny.
Raha mbola zaza i Nacho dia nanana toetra malemy sy mangina. Etsy ankilany kosa, afaka ny ho tapa-kevitra sy hentitra izy amin'ny fikatsahany fahalalana sy ny fampifanarahana amin'ny soatoavina ara-môraly nampianarin'ny ray aman-dreniny azy. Ny fikarakarana tsara ny mpiray tam-po aminy dia manondro toetra hafa nomena an'i Nacho nandritra ny fahazazany.
Ny fananana Real Madrid akaikin'ny tranon-dry zareo dia namorona an'io endriny voajanahary io ho an'ny baolina nentin'ny ray aman-drenin'i Nacho. Samy nanampy ny zanany ny ray aman-dreny mba hampivelatra ny endriny voajanahary ho an'ny baolina kitra.
Ny fitiavan-tanan'i Nacho sy Alex ho an'ny baolina kitra dia nahita azy ireo nisoratra anarana tao amin'ny lisitry ny ekipa tanora ao an-toerana, AD Complutense. Ity ekipa ao an-toerana ity dia nanome an'i Nacho sy Alex ny sehatra hanehoana ny talentany. Ny sary lehibe ho an'ireo ankizilahy dia tokony hahazo fisoratana anarana tsara ao amin'ny Akademia Real Madrid.
Nacho Fernandez Childhood Story Plus Untold -Mitsangàna mba ho ankizilahy
Taorian'ny fandaniana taona maromaro tao amin'ny AD Complutense, dia efa vonona ho amin'ny fanamby goavana i Nacho. Amin'ny famporisihana avy amin'ny ray aman-dreniny, dia nanapa-kevitra ny handalo fitsapana ao amin'ny Akademia Real Madrid. Tonga i Nacho Real Madridny rafitry ny tanora tamin'ny taona 11.
Taorian'ny herintaona tao amin'ny Akademia, dia nilaza ny dokotera fa diabeta izy. Tamin'ity fotoana ity dia namaritra ny tolona tao Nacho ny ampahany manan-danja indrindra tamin'ny vanim-potoanany. Voalohany, nomena torohevitra izy mba ho tapa-kevitra, amin'ny tsy famelany ny aretina amin'ny fiantraikany ratsy. Ny fananana fanoloran-tena ho an'ny baolina kitra dia midika fa sarotra ho an'i Nacho ny mijery ny asany ary mitantana ny fahasalamany amin'ny lafiny iray hafa. Ny voalohany dia tsy maintsy natao sorona ho an'ny iray hafa. Ao amin'ny teniny;
Tsaroako ny mandeha any amin'ny hopitaly - tokony handeha amin'ny fifaninanana miaraka amin'i Real Madrid aho saingy tsy maintsy nandiso izany - ary nahita dokotera aho fa tsy endocrinologist. Nilaza izy fa efa tapitra ny andro fohy nataoko.
Nanana fotoan-tsarotra tokoa aho tamin'io faran'ny herinandro io. Telo andro taty aoriana dia nahita an'i Dr Ramírez aho, izay ho lasa endocrinologist tsy tapaka ary tena tiako. Nolazainy tamiko ny mifanohitra tanteraka: tsy nisy lalao baolina kitra ho ahy. Raha ny marina dia tena nilaina aho nilalao satria ny fampiharana ara-batana dia tena zava-dehibe. Ny alatsinainy dia nanomboka indray ny fiainako.
Nahazo fikarakarana bebe kokoa tamin'ny sakafo i Nacho sy ny fanohanany ny kliobany. Ankoatra ny fitazanany ara-pahasalamana bebe kokoa, dia tsy maintsy nitondra ny fitaovam-pitsaboana toy izany i Nacho Fanafody diabetika, finday, sns sns, kitapom-batana voalohany, insulin, monitor, tavoahangy rano sns.
Nisy karazan-tsakafo niahy azy. Nahomby i Nacho satria nanjary nifehy ny diabeta. Ankoatr'izany, nahasalama niaraka tamin'ireo mpitsabo azy izy, nanohy ny asany tsy nisy tahotra ary nihalehibe ny laharana baolina kitra ataon'ny tanora.
Amin'ny 2 September 2012, mpitantana ny ekipa lehibe José Mourinho dia nilaza fa i Nacho, miaraka amin'ny Álvaro Morata ary i Jesús, dia hoentina ho an'ny ekipa voalohany saingy mbola milalao an'i Castilla. Izy sy ny rahalahiny dia nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Akademia Real Madrid, ary samy nanao ny lalao voalohany voalohany tamin'ny lalao izy ireo. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Nacho Fernandez Childhood Story Plus Untold -Relationship Life
Ny baolina dia hazo volamena, toerana iray ahitana an'i Nacho nahita alokaloka sy fampiononana rehefa sahiran-tsaina amin'ny Diabeta. Ao amin'ny hafa mba hananganana sary iray feno ny fiainany, Ny fitadiavana ny fitiavana koa dia manan-danja amin'ny Nacho. Izay hitany tany Maria Cortes Milano izay teraka tamin'ny 13 February 1989 (herintaona mahery noho ny vadiny).
Nihaona tamin'ny sekoliny i Nacho sy Maria nandritra ny taona vitsivitsy tao amin'ny Akademia Real Madrid. Maria dia nahazo mari-pahaizana amin'ny Marketing sy Communication. Nanambady an'i 2014 tao amin'ny Fiangonana Iglesia de la Asunción ao Meco (Madrid) i Nacho sy Maria.
Naterak'i Nacho taorian'ny fanambadiany tamin'i Maria dia nahazo zanaka mahafatifaty anankiroa izay hita tao amin'ny fotoam-pifaliana nahaterahany.
Nacho no nanaporofo fa lehilahy iray ao amin'ny fianakaviana izy rehefa niteny izy; "Na dia tsy milalao aza aho, dia matetika aho no olona tony," Nampiany. "Tiako ny miresaka be loatra amin'ny fianakaviako." Eto ambany ny fianakaviana mankalaza ny maherifony sy ny modely modely amin'ny andro nahaterahany.
Nacho Fernandez Childhood Story Plus Untold -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ireo ray aman-drenin'i Nacho; José María Fernández ary Maite Iglesias dia olona roa fototra Nacho ny karena. The Real Madrid Ny mpilalao baolina kitra dia tao amin'ny club club fotsy nandritra ny taona 15 noho ny ampahany betsaka amin'ny toe-tsaina izay azon'ny ray aman-dreniny nampiditra azy tao anaty zaza. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza taminy foana ny ray aman-dreniny;
Ry zanako, ankafizo amina fotoana fohy miaraka amin'ny lobaka fotsy sy miasa mba hahatratrarana ny tanjonao.
Nacho Izy no mibebaka imbetsaka.
"Isaky ny nody aho, dia nilaza tamiko ny ray aman-dreniko hoe 'eritrereto hoe aiza ianao mandeha, ary manararaotra izany, satria tsy fantatrao hoe rahoviana no hifarana ilay izy.'
Ny ray aman-dreniny; José María ary Maite dia mahatsapa ny fahasarotana izay tsy vitan'ny milalao fotsiny Real Madrid fa mijanona mandritra ny taona maro. Samy nanohana ny zanak'izy ireo malalany izy ireo, na dia tsy nahita fotoana nilalao tamin'ny klioba aza izy ireo.
Ity finoana ity izay manana faharetana amin'ny klioba iray dia tsy mandeha tsara amin'ny Alex (zandriny lahin'i Nacho) izay niafara tamin'ny fitadiavana ny fiainana lavitra an'i Bernabéu taorian'ny naha-voalohany an'i Real Madrid.
Álex dia nandao an'i Real Madrid tamin'ny volana 2013, tamin'ny alàlan'ny fifanarahana iraisam-pirenena. Nosoratana tsy ela taorian'izany izy RCD Espanyol tao amin'ny ambaratonga avo indrindra izay niadiany tamin'ny ekipa zokiny.
Avy amin'ny 2015 hatramin'ny 2017, Alex dia nilalao ho an'ny klioba efatra namely; Rijeka, Reading, Elche ary Cádiz.
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pitiavantsika Nacho Fernandez momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Ferland Mendy tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa
Luka Modric tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola fantatra
Denis Cheryshev tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Daty efa namboarina: 23 septambra 2018
C Ronaldo Fitiavana ny Tantara momba ny Ankizy Tampoka